विराटनगर, ३० भदौ । विराटनगरमा बुधबार ६३ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै विराटनगरमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ३ हजार ४३ जना पुगेको महानगरले जनाएको छ । विराटनगरमा हालसम्म १० हजार ९ सय ७६ जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् । विराटनगरमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या १७४ पुगेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । कुन वडामा कति संक्रमित ? –विराटनगर १ मा ५ जना –विराटनगर २ मा ६ जना –विराटनगर ३ मा १२ जना –विराटनगर ४ मा ३ जना –विराटनगर ५ मा ८ जना –विराटनगर ६ मा ७ जना –विराटनगर ७ मा ४ जना –विराटनगर ८ मा ६ जना –विराटनगर ९ मा ० जना –विराटनगर १० मा २ जना –विराटनगर ११ मा ३ जना –विराटनगर १२ मा ० जना –विराटनगर १३ मा १ जना –विराटनगर १४ मा १ जना –विराटनगर १५ मा १ जना –विराटनगर १६ मा ० जना –विराटनगर १७ मा ० जना –विराटनगर १८ मा ० जना –विराटनगर १९ मा ० जना र वडा नखुलेका तीन जनामा संक्रमण देखिएको जनाइएको छ । - News Birat
विराटनगर, ३० भदौ । विराटनगरमा बुधबार ६३ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै विराटनगरमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ३ हजार ४३ जना पुगेको महानगरले जनाएको छ । विराटनगरमा हालसम्म १० हजार ९ सय ७६ जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् । विराटनगरमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या १७४ पुगेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । कुन वडामा कति संक्रमित ? –विराटनगर १ मा ५ जना –विराटनगर २ मा ६ जना –विराटनगर ३ मा १२ जना –विराटनगर ४ मा ३ जना –विराटनगर ५ मा ८ जना –विराटनगर ६ मा ७ जना –विराटनगर ७ मा ४ जना –विराटनगर ८ मा ६ जना –विराटनगर ९ मा ० जना –विराटनगर १० मा २ जना –विराटनगर ११ मा ३ जना –विराटनगर १२ मा ० जना –विराटनगर १३ मा १ जना –विराटनगर १४ मा १ जना –विराटनगर १५ मा १ जना –विराटनगर १६ मा ० जना –विराटनगर १७ मा ० जना –विराटनगर १८ मा ० जना –विराटनगर १९ मा ० जना र वडा नखुलेका तीन जनामा संक्रमण देखिएको जनाइएको छ ।
विराटनगर, ३० भदौ । विराटनगरमा बुधबार ६३ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै विराटनगरमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ३ हजार ४३ जना पुगेको महानगरले जनाएको छ । विराटनगरमा हालसम्म १० हजार ९ सय ७६ जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् । विराटनगरमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या १७४ पुगेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
–विराटनगर १ मा ५ जना
–विराटनगर २ मा ६ जना
–विराटनगर ३ मा १२ जना
–विराटनगर ४ मा ३ जना
–विराटनगर ५ मा ८ जना
–विराटनगर ७ मा ४ जना
–विराटनगर ८ मा ६ जना
–विराटनगर ९ मा ० जना
–विराटनगर १४ मा १ जना
र वडा नखुलेका तीन जनामा संक्रमण देखिएको जनाइएको छ ।
बुधबार, ३० भाद्र २०७८, २३:१४ September 15, 2021 मा प्रकाशित